Date My Pet » Ratidza Kuda Kwako Pasina Words
Last updated: Oct. 15 2020 | 2 Maminitsi verenga
Mhando akati zvakanaka pavakati, “Kupfuura mashoko ose iwe kuita kuti zvechokwadi. Zvadaro mungadai musina kuti unondida. Kosi ndingada nechekare.” kwavo raparadza huru kubva '80 wacho, Kudarika mashoko. Uye kuti ndiye mukuru mhando kuti isu tose tariro. Pane nzira dzakawanda kuratidza munhu manzwiro aunoita isingapwi zvinoda kushandisa mashoko sechinhu chokushandisa. Hechino shanu nzira kuudza kuti munhu anokosha chaizvo sei uchinzwa:
OK, saka zvazviri yaigona kunzi zvishomanana munyengeri nokuti mashoko ndiwo mashoko asi haisi shoko rinotaurwa. Pane nziyo zhinji yakanaka kusarudza kubva kusanganisira Bryan Adams’ denga, Cyndi Lauper kwakaita Time Mushure Time uye Alanis Morissette musoro Over Tsoka zvichienderana shoko muri kuedza kutumira. Just omerera pamusoro rekodhi kana uri muimbi kana / uye muimbi hauchazopi nei izvozvo achingozvitambudza panguva serenading wamaida? It inowedzera kupfuura chaiko.
Flowers & zvipo
Flowers muri guru nzira wokuratidza rudo rwenyu pasina chaizvoizvo vachiti. Saka nechokwadi munoziva rudo rwenyu kufarira ruva uye kubva ikoko. Kana kuti zvinogona kuitika ndezvokuti kuenda nokuda chinhu Vakafanana kana havasi kupinda chinyakare maruva akaita mafuta / aftershave, gadzirisa, mabhuku, maDVD, nezvimwewo … Achiratidza kuti munoziva zvinhu Vakafanana chinoratidza kuti munhu rudo rwako nokuti kuvateerera uye imi mucharangarira chii Vakafanana. Vanhu vanoona izvi kunyange kana vasingagari kutaura chinhu.
Kuvabvumira Control Of The Remote Control
Kubvumira rudo rwenyu kudzora kure kuzvidzora pane kutora pamusoro dzose nguva yava chinonhuhwira anokunyengedzera nzira yokuratidza munovada. Shure kwezvose, kupa enyu kufarira anoratidza kuva rudo, handitika?!
Kana uri okusika kusika munhu kudanana mufananidzo rudo rwenyu kunogona kuva zvechokwadi kudanana pfungwa. Kana imwe pfungwa yakanaka iri kuwana mufananidzo muri vaviri dzakanyatsoumbwa kupa rudo hwako.
Kuzogara / Vanoroorana navo
Zvakanaka hapana nzira iri nani pane kuratidza rudo rwenyu munhu pane vakaita kwavari! Saka kana wagadzirira uye uchifunga vave zvakare, wakamirira chii?!
Online Dating: Kudzivisa Being Catfished
Leslie kuti Top Gumi Dos Nezvokusaita Wemichero Doggie Etiquette